Knowledge Archives - MYATMINGALAR
ခေါင်းဆောင်များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သော ခေါင်းဆောင်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်သည်။ (Good Leader is Leader of Leaders.) ဗာနဗသည် ယေရုရှလင်အသင်းတော်အစောပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားခဲ့သောခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဗာနဗ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သက်သာစေခြင်း၏သား ဖြစ်သည်။(တမန် ၄း၃၆) (၁) ဗာနဗသည် သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်နှင့်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံသောခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ (တမန်တော်၁၁း၂၄) (၂) ဗာနဗသည် ကိုယ်ကျိုးရှာသောသူမဟုတ် ဥစ္စာေ၀မျှသော ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ Continue Reading
ငယ်ငယ်တုန်းက စာသင်ခန်းထဲမှာ အိုင်တီ- အစ် ထိုအရာဆိုပြီး နာမ်စားတစ်ခုအနေနဲ့ အရင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ နည်းနည်း ကြီးလာတော့ အစ်ကိုကြီး အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ အစ်မကြီး အရပ်ခပ်ပုပုတွဲ၍ အိုင်တီလို့ မှတ်သားရပြန်တယ်။ အဲဒီထက် ပိုမသိခဲ့ဘူးဗျ။ အရာ၀တ္ထုတွေအတွက်သုံးတဲ့ နာမ်စားရယ်။ သမီးရည်းစား အရပ်မညီတဲ့သူတွေအတွက် စကြ နောက်ကြတဲ့ စကားရယ် ဒါပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းသာ အသက်ကြီးလာတယ် …………. ကျွန်တော်လည်း အရာ၀တ်္ထု Continue Reading
Posted On : March 7, 2016 Published By : MYATMINGALAR